Noocyo qajaar la mid ah Parthenocarpic | January 2020
Tani waa wax cusub: qajaarka Parthenocarpic
Suuqa casriga ah ee abuurka qajaar, alaabo badan oo ka badan oo muuqda, taas oo ah natiijada miraha caanaha casriga ah. Qof kastaa wuxuu caadaystay qoraallada caadiga ah ee nooca "kala duwan" ama "hybrid." Laakiin xirmooyinka qaarkood waxaad ka heli kartaa weedh sida "geedka" Parthenocarpic ", dadkuna si buuxda uma fahmin waxa weedhani macnaheedu yahay.
Iska caawi: qajaarka is-iskudhisan
Iyadoo bilawga xilliga xagaaga, dad badan oo xagaa deggan xagaaga ayaa raadinaya noocyo cusub oo qajaarka ah oo aan u baahnayn daryeel gaar ah oo siin doona dalag xasilloon. Laakiin dhibaatada ayaa laga yaabaa inay soo baxdo marka koraan dalagga beeraha lagu koriyo. Ka dib oo dhan, noocyo badan oo qajaarka u baahan tahay pollination by bees, iyo sida loo sameeyo in meel dhulka xiran?
Way adag tahay in la helo beerta qurxinta leh ee aan ku mashquulin qajaarka. Laakiin xitaa wuu ogyahay in guusha ee sii kordhaya dalagga beerta this ku xiran tahay doorashada saxda ah ee kala duwan ee dhirta. Wixii beereed ee dhulka u furan waa mid ku haboon fasalka "Adag". Cucumber "Courage F1": Tilmaamaha kala-duwanaanta Qeexida qajaarka "Dareemaha" waxaa ku jira warar sheegaya in dhirta ay calaamad u tahay nooca haweenka ah ee ubax.
Cucumber "Zozulya": sharaxaad ka mid ah noocyada kala duwan iyo beerista agrotechnics
Qiimaha qajaarka qunyar-socodka ah waa in miraha lagu sameeyay wakhti gaaban aaney qadhaadh ahayn. Waxaa ka mid ah beeralayda qudaarta ah, noocyada qajaarka ee "Zozulya F1" waa mid aad u caan ah oo ka mid ah beeralayda qudaarta ah 40kii sanadood ee jiritaanka iyo koray 100 jeer, waxay caddaynaysaa kalsoonida macaamiisha. Tixgeli sifooyinka beerahooda ku yaala aqalka dhirta lagu koriyo iyo beerta.
Sida loo koro qajaarka Dutch "Masha f1" ee bannaanka u furan
Ka mid ah noocyada qajaarka kala duwan oo badan, Dutch, oo kala duwan oo hore u bislaaday qajaar leh magaca magaca xiiso leh "Masha f1" wuxuu ku fadhiyaa meesha ugu horeysa. Taariikhda Dhallinta Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan noocyada kala duwan ee dibadda ee qajaarka "Masha F1" oo fahmaa dhammaan faahfaahinta beerashadooda, waa inaad tixraacdaa sharaxaadda faahfaahsan.
Faa'iidooyinka iyo shuruucda sii kordhaya colonel dhab ah kala duwan oo qajaar ah
Maanta, noocyo kala duwan oo qajaar ah waa sidaas aad u weyn in dadka deggan xagaaga oo kaliya ay indhaha ku hayaan. Meel ku filan oo liiskan liiskan leh waxaa lagu qabsadey "Gacan-doorasho dhab ah", oo leh dhadhan aad u fiican oo u adeegsanaya. Tilmaamaha Qaybinta "Kacaanka True" noocyo kala duwan ayaa loo saari karaa Beelaha dhexdhexaad ah oo leh wax-soosaarkooda sarreeya oo ku siina sharaxaaddan soo socota: 45 cisho gudahood kaddib marka ay soo baxaan geedo badan oo dhaadheer, waxay bilaabaan inay midho dhaleen, miraha way wada darsadaan.
Goosashada weyn ee ku taal meeshi yar: noocyo kala duwan oo khudrad ah Taganay
In kasta oo xaqiiqda ah in qajaarka ah ee "Taganai" kala duwan soo bandhigay by dhawaan breeders, waxay mar hore u suurtagashay in ay noqdaan kuwa ugu cadcad ee bannaanka u badan iyo milkiilayaasha guryaha xagaaga. Kala duwanaan noocyada Ural ee Ural waa mid aad u fiican oo lagu beeray gadaal agagaarka aag yar, sababtoo ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad ururiso tiro badan oo dalagyo ah oo tiro yar oo duurka ah.
Crispin F1 oo qallajin ah oo hore u bislaaday "Crispin F1"
Bannaanka u badan ayaa xiiseynaya dalagyada ka dhigi kara suurtagal in la goosan karo horaantii caadiga ah. Muhiim maaha haddii aad kobciso yaanyada, qajaarka ama khudaarta kale - wakhtiga hore ama celceliska wakhtigooda Bisaylkiisa waxay noqon doonaan dood culus oo ku salaysan mid ama noocyo kala duwan. In this article waxaan ka wada hadli doonaa mid ka mid ah hybrid ka mid ah qajaarka, kaas oo kuu ogolaanaya inaad soo ururiso dalagga ugu horeysay ee waqti gaaban.
Bisaylkiisa hore iyo midho dhalaalaya: qaababka daryeelka kala duwan ee qajaarka
Inkasta oo jiritaanka tiro badan oo kala duwan oo kala duwan oo qajaar ah, bannaanka u badan ammaan ku leh Emerald earrings, taas oo runtii leeyahay sharaxaad fiican. Aan fahamno dabeecadaha kala duwan ee kala duwan iyo faa'iidooyinkooda dadka kale. Sawir iyo sharaxaad Kala duwan oo cayiman oo qajaarka ah ayaa leh muuqaal caadi ah, laakiin beeralayda waayo-aragnimo wali waxay fiiro gaar ah u leeyihiin nudaha qaarkood.
Qodob ka sarreeya iyo Bisaylkiisa hore: Siberian garland qajaarka kala duwan
Mararka qaar baaxadda dhulka hoosteeda ma ogola inay u qoondeeyaan meelo ku filan sariiraha leh khudradda caanka ah sida qajaarka. Xaaladdan, dabayaaqada xagaaga ayaa badbaadin kara beerista noocyo sarreysa oo loo yaqaan "Siberian garland F1". Qajaarka mustaqbalka: sharraxaaddan Heerka F1 ee mawduuca, waxaa cad in "Siberian garland F1" ay tilmaamayso noocyo kala duwan.
Cucumber Meringue: sharaxaadda iyo beerista
Si aad u hesho dalagyo wanaagsan oo qajaarka ah, waxaad u baahan tahay inaad qaadato hab masuuliyad u leh xulashada noocyo kala duwan. Waxay labadaba ku bexeen bees, iyo is-iskuday. Kuwaas waxaa ka mid ah noocyada qajaarka "Merenga". Aan fiirino aragti dhow oo ah sifooyinka iyo tiknoolojiga sii kordhaya. Sharaxaadda noocyada kala duwan ee qajaarka "Meringue F1" waa nooc cusub oo iskood u sameysma iskood u goynta hore oo ay u sameeyaan tarbiilayaasha Dutch.
Cucumber "Ecole F1": sifooyinka iyo beerista agrotechnology
Doorashada noocyo kala duwan oo qajaarka ah, badanaa way adag tahay in la go'aamiyo sababtoo ah shaki ku jiro dhalidda, iska caabinta cudurka, dabeecada dhadhanka iyo astaamaha beerashada, beerashada, kaydinta. Qodobkani waxaan tixgelin doonaa dhammaan su'aalaha xiisaha leh ee ku saabsan qadarka qadar-dheer ee Ekol F1 - mid ka mid ah dadka cusub ee ugu fiican ee doorashada.
Cucumber "Cedric": sharax, beerto iyo daryeel
Cucumber "Cedric" - Parthenocarpic, taas oo ah, uma baahna pollination, noocyo hore ee nooc furan. Waxaa lagu talinayaa in ay ku koraan aqalka dhirta lagu koriyo ama filimka hoostiisa, inkasta oo laga beerto dhul furan sidoo kale lama mamnuucayo. Tani waa warshad dhexdhexaad ah oo xoog leh, oo aan si dhakhso ah ugu jirin daryeelka. Qeexida Kala duwan waxay leedahay nidaam xidideysan oo hore u bislaaday.
Cucumber "Kibriya f1": dabeecadaha iyo beerashada agrotechnics
Qajaaradu waxay noqdeen qayb ka mid ah cuntooyinka maalinlaha ah, khudraddaasina waxay ku jiraan miiskayaga ku dhowaad sanadka oo dhan. Qof kasta oo ka mid ah dadka degan xagaaga ayaa si weyn ugu koraaya sariiraha ama aqalka dhirta lagu koriyo. Noocyada noocyada kala duwan ayaa ah mid cajiib ah, waxaanay ku adkeyneysaa nooca door bidida.
Cucumber "Cupid f1": sifooyinka, beeritaanka iyo daryeelka
Inta badan, bannaanka iyo bannaanka u soo baxaan dhibaatada ah nooca qajaarka si ay u doortaan beeritaanka. Dad badan ayaa ku hanuuniya xulashada talo-siinta saaxiibada ama waxay door bidaan khudradda ay jecelyihiin muuqaalka. Si kastaba ha noqotee, marka ugu horeysa, dareenka waa in la siiyaa habboonaanta noocyada kala duwan ee aagga cimilada taas oo la qorsheeyay in la beeray.
Cucumber "Spino": dabeecadaha, beerashada agrotechnics
Cucumber "Spino" - noocyo isku dhafan oo hore u kaca. Noocani wuxuu u adkaystaa la'aanta ifilada waxaana loogu talagalay beerista labadii wareeg ee hore ee ciidda la ilaaliyo. Taariikhda la qabadsiinta Noocani waxa loo adeegsadey tarbiilayaal Dutch ah oo ka socda shirkadda "Syngenta". Waxay abuuri jireen riwaayad balaadhan oo khudradda ka mid ah.
Sida loo abuuro oo u koro qajaarka "Dhammaan xaasidnimo"
Cucumber oo leh magac aan caadi ahayn oo rajo leh - "Qof kasta oo xaasidnimada f1" - waa noocyo aad u caan ah oo ka mid ah dadka degaanka xagaaga oo leh waayo-aragnimo kala duwan ee khudaarta sii kordhaya. Geedkaas wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan, oo ka mid ah, dabcan, wax-soosaarka sare. Sida laga soo xigtay dib u eegista ee bannaanka u khibrad badan, geedi socodka ubaxyo xiisaha leh quruxda, iyo tirada of goosashada run ahaantii cajiib ah - tixgeliyaan sifooyinka qajaarka ee maqaalkan.
Cucumber - laga yaabee mid ka mid ah midhaha ugu khudradda badan ee caanka ku ah meeraha. Ku haboon in la isticmaalo cayriin, oo qayb ka ah saladhyo kala duwan, iyo qashin, pickling iyo ilaalinta. Zelentsy waxay ku farxi kartaa isha dhammaan xagaaga. Breeders waxeey soo saartey noocyo kala duwan oo kala duwan, taas oo ciribtirtay qaar ka mid ah cilladaha dhaqanka ee dabiiciga ah waxayna hirgeliyeen sifooyin wanaagsan.
Sida loo abuuro oo u koro qajaarka "Shosh"
Beelaha Partenokarpic ee qajaarka waxay leeyihiin faa'iido qaas ah noocyada caadiga ah ee loo isticmaalo - uma baahna pollination. Dabcan, bannaanka uma gudbin noocyo noocaas ah. Ka mid ah Beelaha kuwan qajaarka ka muuqata suuqyadeena, noocyada kala duwan ee "Shosh F1" ayaa u muuqday, kaas oo lagu dhalaaliyay beeraha Ruushka.
Khudradda cusub waxay u muuqaneysaa miiska, laakiin mid ka mid ah macaamiishii ugu da 'weynaa waa qajaar. Maanta waxaa jira noocyo kala duwan oo kala duwan. Waxaa ka mid ah hore, dhexe, dhammaadka, dhirta iyo pollinated dhirta. In this article waxaan ka hadli doonaa ku saabsan hore ee "Paratunka F1".